Miyuu Lionel Messi ku soo bilaaban doonaa safka hore kulanka ay caawa Barcelona booqanayso Athletic Bilbao? – Gool FM
Miyuu Lionel Messi ku soo bilaaban doonaa safka hore kulanka ay caawa Barcelona booqanayso Athletic Bilbao?
(Bilbao) 10 Feb 2019. Macallinka kooxda kubadda cagta Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa haysan doona xiddigii weerarka uga dheela ee Lionel Messi oo dib u soo laabtay kulanka ay u safrayaan caawa oo Axad ah naadiga Athletic Bilbao.
Xiddiga xulka qaranka Argentina ayaa taam ahaansho waxaa ugu filnaaday inuu kursiga keydka ka soo kaco kulankii ay Arbacadii Barcelona barbaro 1-1 la gashay Real Madrid ee Copa del Rey kaddib dhaawac muruqa ah oo uu la dhibtoonayey.
Tababare Valverde ayaa la filayaa inuu ka taxadaro Messi, maadaama ay lugta hore ee wareegga 16-ka Champions League la ciyaari doonaan kooxda Lyon 19-ka bishan Febraayo.
Isagoo ka hadlayey Sabtidii shirkiisa jaraa’id ee ka horreeyey kulanka Bilbao ayuu macallin Valverde yiri: “Had iyo jeer waa inaan sugnaa si aan go’aan u qaadanno.
“Waa maalin kale oo aanan doonaynin inaan halis gelinno isaga, waxaan haysannaa xaalad la mid ah tii hore kulanka Berri.”
“Leo isagu waa Okay, laakiin haddii uusan 100% taam ahayn, wuxuu helayaa waqti kale oo uu ku ciyaari karo.”
31-sano jirkaan Messi ayaa dhawaan noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee taariikhda horyaalka La Liga ka dhaliya 400 oo gool.
Madaxda Kooxda Manchester United oo la kulmay la taliyaha Macallin Ole Gunnar Solskjaer
Arsenal oo dib ugu soo laabanaysa doonista Jean-Philippe Gbamin